बुद्धि तामाङकै अगाडि डुब्लिकेट हैटले मंगलीलाई फोन हान्दा…. (भिडियो) – Gulminews
Home/भिडियो/बुद्धि तामाङकै अगाडि डुब्लिकेट हैटले मंगलीलाई फोन हान्दा…. (भिडियो)
बुद्धि तामाङकै अगाडि डुब्लिकेट हैटले मंगलीलाई फोन हान्दा…. (भिडियो)
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ असार ४, बुधबार ००:३५ मा प्रकाशित
आफ्नै डुब्लिकेट देख्दा बुद्धि तामाङ चकित
काठमाडौं, असार ३ । कलाकार बुद्धि तामाङ यति बेला निकै चर्चामा छन् । नेपाली रंगमञ्च हुँदै फिल्म र टेलिसिरियलमा स्थापित उनले चलचित्र कबड्डीबाट फिल्मी क्षेत्रमा पाइला राखेका हुन् ।
यो पनी पढ्नुस्: १ किलोकै ३० लाख रुपैँया पर्ने काठ, गुल्मीमा एक पुर्व लाहुरेको यो जंगलमा पुग्दा जे देखियो (भिडियो)
तामाङले कबड्डी’, ‘घामपानी’, ‘पुरानो ढुंगा’, ‘बिजुली मेसिन’, ‘छक्कापञ्जा २’, ‘दुई रुपैयाँ’, ‘कबड्डी कबड्डी’, ‘तान्द्रो’लगायत थुप्रै फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेका छन् । हैट थेगो बोलेर चर्चित भएका बुद्धि तामाङ अहिलेका सबै भन्दा ब्यस्त कलाकार मध्यका एक हुन् ।
यो पनी पढ्नुस्: गुल्मीका यि युवा जो प्रेसर कुकरमा गुल्मीको कफी बनाई बेच्छन्, कमाउँछन् महिनाकै ५ लाख रुपैँया सम्म
यतिबेला बुद्धि तामाङ जस्तै हाउभाउ, मिल्दोजुल्दो जिउडाल र लवज भएका कुमार तामाङ पनि चर्चामा छन् । पहिलोपटक भेटेर मिडियामा अन्तर्वातामा आएका उनिहरु जुम्ल्याहा दाजुभाई जस्तो देखिन्छन् । आफ्नै डुप्लिकेट देख्दा के भने बुद्धि तामाङले ? आफ्नै अगाडि डुब्लिकेट हैटले मंगलीलाई फोन हान्दा कसो गरिन् मंगली, हेरौँ भिडियो: